An-kitsim-po: Kely ny fanantenana | NewsMada
Tamin’ity taona ity no ambony indrindra ny maripana teto amintsika sy maneran-tany. Tsy ampy koa ny ranon’orana, miantraika mivantana any amin’ny fambolena, mitarika mankany amin’ny tsy fahampian-tsakafo. Firenena mifototra amin’ny fambolena rahateo i Madagasikara, sady mivelona aminy ny 75%-n’ny Malagasy.
Kely ny fanantenan’ny tantsaha mpamboly amin’izao tsy fahampian’ny orana ho enti-mamokatra izao. Kely ny fanantenana satria tsy fantatra na ho afaka hamboly vary ihany ireo manao vakiambiaty aty afovoan-tany, indrindra any Alaotra, sompitr’i Madagasikara, tena mamatsy an’Antananarivo sy Toamasina.
Efa endrika iray manamafy ity loza manambana ity ny firongatry ny kere any atsimo, mahatonga ireo mponina hitsoaka mamonjy tanàn-dehibe sy aty afovoan-tany. Soa fa nahazo rano tsara ny tapany avaratry ny Nosy, sady mamokatra rahateo iny faritra iny. Mirona mamboly voly fihinana ny mponina ankehitriny fa tsy nionona tamin’ny fambolena voly fanondrana intsony.